Orinasa mpanokatra tavoahangy - Mpanamboatra sy mpamatsy mpamaky tavoahangy China
Ny mpanokatra tavoahangy dia fitaovana fototra iray amin'ny fanomezana fanomezana ankehitriny sy ny fisafidianana fanomezana ho an'ny mpivarotra bartender manokana, trano fandraisam-bahiny, fianakaviana, fivarotana lehibe na marika sns... Ny fanomezana Pretty Shiny dia mamokatra mpamoha tavoahangy maro amin'ny fomba, fitaovana, loko, endrika ary habe arakaraka ny fotoana sy tanjona samihafa. Raha te hihaona amin'ny fangatahana isan-karazany dia manana lasitra misy avy amin'ny kalitao mahazatra hatramin'ny avo indrindra izahay, azonao atao ny mifidy laser na pirinty pirinty amin'izy ireo mivantana mba hahatonga azy io ho karazana tsy manam-paharoa anao, ary koa tongasoa anao handefa ny logo anao sy ny marikao eo am-panafarana tavoahangy manokana mpampisokatra avy aminay. Famaritana: Safidy: mpanokatra tavoahangy labiera fampiroboroboana, mpanokatra tavoahangy carte de crédit, mpanokatra tavoahangy vita amin'ny fanao, mpamorona misokatra endrika. ● Fitaovana azo alaina: Varahina, Vy, firaka zinc, vy vy, Aluminium sns. ● Size: misokatra ny haben'ny famolavolana & habe namboarina. ● Lokon-kazo: Volamena, volafotsy, alimo, nikela, varahina, Rhodium, Chrome, nikela mainty, varahina fahagola, volafotsy fahagola, varahina fahagola, volamena satin, volafotsy satin, loko roa sosona, sns. ● Logo: nasiana tombo-kase, fandefasana sary, voasokitra sary, voasokitra, hosodoko na vita pirinty amin'ny lafiny iray na lafiny roa, sns. ● Safidy fanodinana isan-karazany, misy ny famolavolana misokatra isan-karazany sy ny fanaingoana natao. ● Fonosana: famonosana marobe, fonosana boaty fanomezana namboarina na mifanaraka amin'ny fangatahan'ny mpanjifa
Mpisokatra tavoahangy labiera
Corkscrew mpanokatra tavoahangy mena
Mpanokatra tavoahangy tsy misy fangarony
Zinc Alloy 3D Mpanokatra tavoahangy
Fidget Spinner tavoahangy Keychain
Mpanokatra tavoahangy peratra
Mpanokatra tavoahangy aluminium